Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wokenkan Bible?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Khakass Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mingrelian Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Vlax, Russia) Ronga Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tandroy Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Ná ɛyɛ me sɛ Bible mu yɛ den; mekenkan koraa a merente ase.”—Jovy
“Ná ɛyɛ me sɛ emu nyɛ dɛ.”—Queennie
“M’ani bɔ Bible so a, na ɛrehunahuna me. Ɛso dodo.”—Ezekiel
Nea ebinom aka afa Bible ho ni. Wo nso ɛ? Biribi saa aba wo tirim pɛn? Bible akenkan ayɛ nnipa pii adesoa. Nanso, fa no sɛ woabehu sɛ wokenkan Bible a ebetumi ama w’ani agye, na w’abrabɔ nso bɛyɛ papa. Anka worenkan? Na sɛ wuhu sɛ akwan bi wɔ hɔ a wubetumi afa so akenkan ama ayɛ wo dɛ nso ɛ? Wopɛ sɛ wuhu nea Bible betumi ayɛ ama wo?
Ebinom akenkan Bible anya so mfaso paa. Wo deɛ ma yɛnhwɛ nea wɔwɔ ka.
Aberante bi de Ezekiel. Wadi mfe 20 ne kakra. Nea ɔkae ni: “Kan no, na m’abrabɔ ayɛ sɛ obi a ɔreka kar nso onnim baabi pɔtee a ɔrekɔ. Seesei Bible a mekenkan nti, mahu baabi a m’ani kyerɛ wɔ abrabɔ mu. Afotu pa pii wɔ Bible mu a ebetumi aboa me biribiara mu.”
Ababaa bi a ɔde Frieda nso adi boro mfe 20. Ɔkaa sɛ: “Ná menka mmara koraa. Ɛreyɛ ara ni na me bo afuw. Nanso Bible akenkan ama masua sɛ mɛhyɛ me ho so. Ama seesei memfa nneɛma nhaw me ho bio, enti manya nnamfo pii.”
Ɔbaa bi a ɔde Eunice adi bɛyɛ mfe 50. Ɔno nso asɛm ni: “Bible akenkan nti, ade rekye a ade resa yi nyinaa na me suban reyɛ fɛ. Ɛresesa me paa.”
Nnipa a yɛaka wɔn ho asɛm yi ne nnipa mpempem pii ahu sɛ, wode Bible akenkan hyɛ wo ho a, w’ani rentan wɔ abrabɔ mu. (Yesaia 48:17, 18) Bible akenkan so mfaso dɔɔso. Ebi ne sɛ (1) ɛbɛma woasi gyinae pa, (2) wubenya nnamfo pa, (3) worenteetee wɔ abrabɔ mu, na (4) ne nyinaa akyi wubehu Onyankopɔn yiye paa. Wompɛ wei na wopɛ dɛn? Afotu a ɛwɔ Bible mu no fi Onyankopɔn hɔ enti sɛ wode yɛ adwuma a, wo nsa rensi fam da. Onyankopɔn deɛ, ontuu fo bɔne da. Bere nyinaa otu fo pa.
Nea ehia ara ne sɛ wobɛfa wo Bible, na woahyɛ ase akenkan. Dɛn na wobɛyɛ na Bible akenkan ayɛ wo dɛ?
Share Share Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wokenkan Bible?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN Wobɛyɛ Dɛn Anya Bible Akenkan So Mfaso?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN Wobɛyɛ Dɛn Anya Bible Akenkan So Mfaso?
Share Share ƆWƐN-ABAN Wobɛyɛ Dɛn Anya Bible Akenkan So Mfaso?
Wobɛyɛ Dɛn Anya Bible Akenkan So Mfaso?
ƆWƐN-ABAN Wobɛyɛ Dɛn Anya Bible Akenkan So Mfaso?